Rooble oo daahfuray Hay’adda Tayo-dhowrka Soomaaliyeed (SAWIRRO) | Dhacdo
Home Wararka Maanta Rooble oo daahfuray Hay’adda Tayo-dhowrka Soomaaliyeed (SAWIRRO)
Rooble oo daahfuray Hay’adda Tayo-dhowrka Soomaaliyeed (SAWIRRO)
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta daah-furay Hay’adda Tayo-dhowrka Soomaaliyeed oo ka shaqeyn doonta hubinta tayada, ilaalinta badeecadaha iyo cuntooyinka dalka soo gala, kaas oo ay soo diyaarisay Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.
Ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa tilmaamay muhiimadda ay u leedahay hay’addan bulshada, taasoo mas’uul ka ah dajinta siyaasadaha, dhaqangelinta sharciyada iyo habraacyada lagu hubinayo badqabka iyo tayada caafimaad ee cuntooyinka iyo badeecadaha.
“Dalkeennu waxa uu noqday meel lagu soo guro waxyaabha dhacay sida cuntooyinka, daawooyinka iyo iwm , laakiin maanta oo ay taariikhdu tahay 27 March, 2021 waxaan haysannaa halbeegyo lagu hubinayo dhammaan waxyaabahaas aan u baahanahay in tayadooda la koontaroolo” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlayay munaasabadda daahfurka hay’adda Tayo-dhowrka Soomaaliyeed.
Waxa uu Ra’iisul Wasaaruhu ku boorriyay ganacsatada in ay u hoggaansamaan halbeegyada tayo-dhowrka, si loo ilaaliyo tayada badeecooyinka kala duwan ee dalka la soo galinayo, isagoo shacabkana ugu baaqay in ay feejignaadaan oo ay iska hubiyaan tayada cuntooyinka iyo badeecooyinka kala duwan ee ay iibsanayaan.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda ayaa Wasaaradda Ganacsiga ku bogaadiyey shaqada adag ee hirgelinta hay’adda Tayo-dhowrka Soomaaliyeed, isagoo xusay in ay ka tarjumayso kartida iyo dadaallada miro-dhalka ah ee lagu tallaabsaday.
Previous articleSomaliya oo sheegtay in maraakiib Masaari ay xaalufinayaan xeebaha dalka
Next articleFarmaajo oo ka tacsiyadeeyay geerida General Ismaaciil Axmed Ismaaciil
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka bogsaday COVID-19
Turkiga oo ka laabtay mowqifkiisii uu ku diidanaa in Sweden & Finland ku biiraan NATO
Hoggaamiye-yaasha G7 oo qaadaya tallaabooyin hor leh, kana dhan ah Ruushka